Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : nyantonony
Entrée Ny Antonony
Texte Tsy hitako izay anton' ity! Mba ataovy amin' ny "antonony" lahy e! - Raharaha tsy misy toniany izany. Teny fandre matetika ireo, iray fototra, avy amin' ny hoe "anto" (tenatenany, fovoany). Ny hoe antonony dia fitambaran' ny "anto" sy ny "onony" (sahaza, mety), ka dia "ao amin' ny tena izy" no heviny; ary ny toniany dia angamba sisa avy amin' ny pasifan' ny verba efa tsy miasa intsony : manantony na manantonona, antoniany.
Zavatra iaraha-manaiky fa soa ny "mahita izay antony" sy ny mahalala ny antonony, ary manisy toniany; saingy izy manahirana ka indraindray ialàna maina, ary anaovana ilay fitenenana somary hatsikana enti-miala tsiny hoe : E... i... sy Randrianantony aza tsy nahita izay antony, k... i... z... y
Miharihary anefa fa tsy azo odian-tsy hita ity fitadiavana ny antonony ity. Tena fombam-piainan' ny olombelona mihitsy, anisan' ny toetra maha-olombelona azy, ny "mahita izay antony" amin' ny ataony rehetra; noho izany tsy maintsy fahavoazana no mitranga nony injay ampandeferina, indrindra ka totofana foana ny hasin' ny antonony sy ny anjaran' ny antony. Fombam-piain' ny olombelonà, hoy isika; ary izany tokoa, fa hevero ange raha tsy voavoatra handanja sy voadidy hifantina izay ataony rehetra ny olombelona e! Ho lavabe izany raha hohazavaina amin' ny ohatra, fa izao ihany no fotory sy hamarino kely : saika ny zavatra rehetra atàontsika olombelona no misy fomba hafa nety ho nanaovana azy, na lalan-kafa azo nankanesana teo, ka dia izay fomba anankiray, na izay lalana anankiray noheverintsika ho tsara indrindra no nofidintsika. Mandanja, mampitaha, mifantina : izany no ataontsika hatrany hatrany. Koa voin-tenan' izay manao rapadango, fa tsy maintsy hitaky azy ny fanaovana tandrevaka. Na ny zavatra vidina, na ny fivoriana aleha, na ny asa atao, na ny sakaiza ikambanana, na ny vady nalaina, ets... dia samy vokatry ny fandanjan' ny saina avokoa.
Misy mihevitra fa amin' ny zava-baventy mpiseho indraindray eo amin' ny fiainana ihany no ilàna fandanjana, toy ny raha hanam-bady, na hifidy asa, fa amin' ny raharaha andavanandro, hoy izy, iza no handany andro hikaroka izay "antonony" . Ny olona tena diso fisaina toy izany no fototry ny anoratana izao teny izao. Adidy tsy maintsy atrehina lalandava ity fitadiavana ny antonony ity. Ny fiainanao samy irery, ilàna azy. Ny tokantranonao, tsy maintsy tapahiny raha tian-ko vanona. Ny ataonao eo amin' ny tany ama-monina, raha tsy lany era amin' ny antonony, hamohehatra anao.
(....) Ary noho ny hasin' ity "antony" sy "antonony" ity ka na tsy mety mandanja aza ny tenanao, na manao diso fanomban-tena aza ianao, tsy avelany tsy akory, fa tsy maintsy hamarininy ny lanja, ary averiny ny tombana, tsy mianina izy raha tsy mody amin' ny tena izy ny raharaha : ehiny ny mpiasa rehetra hanefa ity ninianao nohamavoina. Ary matetika loza! Ny vahoaka no asainy mamaky betroka, fa inona moa no tsy fanta-bahoaka e! "Ny an-trano mpihary, ny ala-trano mpanarangarana" .(....)
Ary ambonin' izany rehetra izany, ilay mpandravina tsy misy toa azy, ilay mpitsara tsy mety diso, ilay azo ampanginina fa tsy azo vonoina, ilay tsy maintsy ho "mahery" rehefa ela ny ela : ny fieritreretana. Na ny tsy hitam-bahoaka sy tsy fanta-panjakana aza, mbola hopoirin' io tsy misy havelany ho very tadidy : ireny vola ianilany foana; ilay saina ambony miasa ho fanimbana; ny fotoana tokony ho nahefan-tsoa, lany maina. Kotikotehin' ny nenina eny am-pijoroana, tsindronin' ny "sakoa izay" hatrany am-pandriana. Rava ny fanantenana; tsy azo sitranina intsony ny ferin' ny fiainana. Aiza ange no tany tsy hikoavan' ny rarivato tsy nisy lanjany...
(Ravelojaona, Gazety Ny Mpandinika, 7 Marsa 1927).